AKHRI NUXURKA: Muxuu Madaxweyne Axmed Madoobe ku sheegay Khudbadii maanta ee Musharraxnimadiisa uu jeediyay! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AKHRI NUXURKA: Muxuu Madaxweyne Axmed Madoobe ku sheegay Khudbadii maanta ee Musharraxnimadiisa...
AKHRI NUXURKA: Muxuu Madaxweyne Axmed Madoobe ku sheegay Khudbadii maanta ee Musharraxnimadiisa uu jeediyay!
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynaha Dowlad Gobaleedka Jubbaland ahna Musharrax Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa maanta Khudbadiisa Musharaxnimo u jeediyay Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Jubbaland, ayaa ka hadlay Guulihii Xukuumaddiisu ay gaartay, Caqabadihii ka hor yimid iyo Qorshaha u dajisan hadii mar kale la doorto.
Musharrax Axmed Madoobe oo ka hadlayay Degaanada Jubbaland ayaa yiri ”Jubbaland wax ay Juquraafi ahaan ka kooban tahay Saddex Gobolka oo ka mid ah dowladda Federalka Soomaaliya,waxa ay ahayd state-kii labaad ee ku dhisma nidaamka Federaalisimka ah.”
Musharrax Axmed Madoobe oo ka hadlayay Arrimaha Amniga ayaa yiri ”Waxaan dhisnay mudadii ay Jubbaland jirtay Ciidan cudud leh oo tayaysan oo la dagaalama Argagixisada, Ciidankaasi waxa uu suurta galiyay in amnigeeda la sugo deegaanada gacanta lagu hayo.”
”Waxaan qorsheynayaa 4-ta sana ee soosocata inaan dhismaha ciidaankenna dhameyatirno dhammaan anagoon cid kale ku xisaab tamayn inaan xoreyno deeganada maqan” ayuu intaas ku daray Musharax Axmed Madoobe
”Waxaan ka shaqayn doonaa xoreynta deegaanada ka maqan gacanta Jubbaland, oo ay ugu horeyso Caasimadda Jubbaland ee Bu,aale, maadaama Afartii sano ee hore aysan jirin cid naga caaawisa.”
Madaxweynihaha Jubbaland oo ah markale Musharrax oo ka hadlayay Arrimaha Siyaasadda ayaa sheegay inay DFS kala shaqeyn doonaan talaabo walba oo dhanka hormarka ah, balse aysan aqbalayn damacyada ka baxsan danaha Dadka Soomaaliyeed.
”Arrimaha siyaasadda waxaan doneynaa inaan DFS kala shaqeyno talaabo walba oo dhanka hormarka loo qaadayo yaraynta baahida iyo daruufaha dadkeenna, ka shaqeynta hormarinta bulshada ayaan ka wada shaqaynaynaa iyo dhammaan maamul wanaaga” ayuu yiri Musharrax Axmed Maxamed Islaam
”Kobcinta dhaqaallaha ayaan wax ka qabanay gaar ahaan dayactirka dekedda iyadoo maraakib degay aan ka soo saarnay dekedda hadana laga shaqeynayo wali hawlaha dayactirka”.
”Horumar ayaan ka sameynay dhanka hirgelinta garoomaha diyaaradaha ee degmooyinka Jubbaland iyadoo aad ogtihiin in degmooyin dhawr ah maanta dhanka garoomada ay aad u shaqeyaan isu socodkana sahlan yahay”.
Axmed Madoobe oo ka hadlayay Qaxootiga Soomaaliyeed ee dib uga soo laabanaya Kenya oo Jubbaland ay xuduudka wadaan ayaa yiri ”Arrimaha dib u dejinta dadka Qaxootiga ka soo laabtay waxaan hubaa inaan ka faa’idnay dadka dalka dib ugu soo laabtay oo ay shaqo wanaagsan ka hayaan hay’adaha dowladda waxaan ka sii shaqeyn donaana arrimaha dib u soo celinta Qaxootiga Soomaaliyeed”.
”Waxaan sare u qaadi doonaa adeega caafimaadka waxaan rabnaa in la tayeeyo laga maarmo caafimaadka dibadda loo aadayo barnaamijka adeegga caafimaadka aad baan xooga u saarayaa dhanka” Musharrax Axmed Madoobe
”Arrimaha Garsoorka wax badan baan ka qabanay oo is bedel muuqdo ayaan ku sameynay hay’adaha kala duwana waa loo dhameystiray” ayuu yiri Madaxweynihii Hore ee Dowlad Gobaleedka Jubbaland ahna Musharax Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe)